XOG: Bilow Ilaa Dhamaad - Ganaaxa Man City, Xilliga La Fulin Doono, Qobbada Loo Cuskaday Iyo 11 Arrimood Oo Ay Tahay Inaad Ogaato - Gool24.Net
XOG: Bilow Ilaa Dhamaad – Ganaaxa Man City, Xilliga La Fulin Doono, Qobbada Loo Cuskaday Iyo 11 Arrimood Oo Ay Tahay Inaad Ogaato
Manchester City ayaa shalay lagu wargeliyey in UEFA ay laba sannadood oo ganaax ah ka saartay tartamada Yurub ee Champions League iyo Europa League, kaddib markii lagu helay in ay meel kaga dhacday sharciga dhaqaale wanaagga oo ay samaysay musuq-maasuq iyoo heshiisyo la been abuuray.
UEFA waxa kale oo ay Manchester City ku ridday ganaax lacageed oo dhan 30 Milyan oo Euro, laakiin koxoda reer England ayaa markiiba shaacisay inay rafcaan u qaadan doonto maxkamadda Garsoorka Ciyaaraha ee CAS.
Haddii la fuliyo go’aankan oo maxkamaddu ay ka caawin weydo City inay ka qaaddo ganaaxan, waxa ay City ka maqnaan doontaa tartamada Yurub labada xili ciyaareed ee soo socda.
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa 11 arrimood oo ay tahay inaad ogaato si aad u hesho xogta wax kasta oo ku saabsan ganaaxa lagu riday Manchester City.
Maa waxay sababta City loo ganaaxay?
Manchester City waxa ciqaabtan ay ku mutaysatay markii lagu helay in ay buunbuunisay heshiisyo ay gashay oo ay sheegtay inay lacago badan ka heshay, taas oo ay uga gol lahayd inay warbixin dhaqaale oo fiican uu gudbiso UEFA oo si ay isaga dhigto naadi lacag badan usoo xerooday marka la garab dhigo kharashkii ay bixisay, waxaanay arrintani dhacday sannadihii u dhexeeyey 2012 illaa 2016. UEFA waxay u xil-saartay arrintan guddida madax-bannaan ee dhaqaale-wanaagga oo magacooda loosoo gaabiyo CFCB, kuwaas oo go’aankooda ay UEFA dhegaysatay bishii hore.
Sidee ayay UEFA u go’aansatay inay baadhitaan ku samayso Man City?
UEFA waxay furtay baadhitaank City kaddib markii uu wargeyska kasoo baxa Germany ee Der Spiegel uu daabacay Fadeexadaha iyo musuqa ay samaysay Manchester City, waxaana barnaamijkaas loogu magac-daray Football Leaks.
Goorma ayaa ganaaxa City hirgeli doonaa?
Haddii uu rafcaanku guuleysan waayo, City waxay ka maqnaan doontaa tartamada Yurub ee labada xili ciyaareed ee 2020/21 iyo 2021/22.
Miyey kusii jiri karaan Champions League xili ciyaareedkan?
Haa. City waxay wareegga 16-ka la ciyaari doontaa Real Madrid oo 13 jeer ku guuleysatay tartanka Champions League. Lugta hore, waxay wada ciyaari doonaan February 26, waxaanay ciyaartaasi ka dhici doontaa Santiago Bernabeu oo ah hoyga Los Blancos, ciyaarta labaadna waxay ku ballansan yihiin Etihad Stadium marka ay taariikhdu tahay March 10.
Muxuu yahay sharciga dhaqaale wanaagga (FFP) ee City ay Jabisay?
Sharciga magaciisa loosoo gaabiyo FFP waxa hirgelisay UEFA si la isugu dayo in kooxaha laga horjoogsado inay galaan xaalad halis ah oo dhaqaale oo ay lacag badan suuqa geliyaan, iyadoo aanay lacag fiican soo gelin. Kooxaha waxa laga filayaa inay u hoggaansamaan oo ay la kulmaan xayndaabka uu sharcigani dhigayo, iyadoo ay bannaan-yaal ka dhigayaan heshiisyada ay galeen iyo lacagaha soo galayba, si ay UEFA ula socoto, una saarto miisaanka dheelli-tirka.
Maxaa sharcigan loogu adeegsaday xukunka City?
Shuruucdan, waxa waajib ah inay u hoggaansamaan dhamaan kooxaha ka qayb-gelaya tartamada Yurub, waxaana markii ugu horreysay la bilaabay sannadkii 2009, hase yeeshee waxa si rasmi ah loo hirgeliyey xili ciyaareedkii 2011/12. Kooxuhu waa inay isku dheelli-tiraan buugaagtooda xisaabta saddexdii sannadood ee kasta.
Koox kasta waxa laga rabaa in dakhliga soo gala ay ka maamusho hawlaheeda, tusaale ahaan, lacagaha ka soo gala garoonka, telefishanka, xayaysiiska, heshiisyada shirkadaha funaanadahooda ay ku dhejistaan, iibka ciyaartoy iyo isbeddelka qiimaha lacagta.
May tahay ciqaabka kooxda jabisa sharcigan?
Waxa jira qodobbo kala duwan oo loo adeegsado xukunka iyo xayiraadda kooxda u hoggaansami weyda sharcigan. Waxay kasoo bilaabmaan heer digniin illaa laga xannibo ka qaybgalka tartamada, taas oo xattaa gaadhi karta in koobab ay kooxi ku guuleysatay laga qaado. Waxa kale oo qayb ka ah in dhibco laga jaro amaba ciyaartooyo ay soo iibsatay lagu qasbo inay dib iskaga celiso.